Web Design Development, Domain, Hosting Servers Services https://www.worldwidemyanmar.com The Best Web Design, Development, Web Hosting, VPS, Dedicated Servers Mon, 24 Feb 2020 10:41:29 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.4 Zero-Tolerance spam policy https://www.worldwidemyanmar.com/zero-tolerance-spam-policy/ Mon, 24 Feb 2020 02:30:20 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=3676
Plugin ယိုပေါက်ကနေ spam မေးလ်တွေပို့တာက CMS တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒါကို website ကို ကိုင်တဲ့ Webmaster/Web Creator တွေအနေနဲ့ သတိထား စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အကူအညီလိုအပ်လျှင် မိမိ၀ယ်ယူထားတဲ့ Host နဲ့ ဆက်သွယ်အကူအညီယူနိုင်ပါတယ်။
Account Temporary Suspend သို့မဟုတ် ယာယီပိတ်ထားခြင်း
ဆိုပြီး ယခင်ကတည်းက ဖော်ပြဖူးပါတယ်။ ထို့အတူ Acceptable Use Policy ကိုလည်းသိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နာရီကို မေးလ်အစောင် ၂၀၀ ပို့လို့ရပါတယ်။ တစ်ရက်ကို မေးလ် ၂ ထောင်ကျော်ပေါ့။ သို့ပေမယ့် spam script တွေကနေ marketing အတွက်ပို့ရင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ထောင် သောင်းချီပါတယ်။
WWM Hosting အနေနဲ့ Client အကောင့်ကနေ spam မေးလ်တွေပို့ပြီဆိုတာနဲ့ site ကိုယာယီပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ WWM မှ မေးလ်တစ်စောင်ရပါလိမ့်မယ်။ ၄င်းမေးလ်တွင် ပိတ်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့ ယေဘုယျ spam file အချို့ကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ မိမိရဲ့ အသုံးပြုတဲ့ IP address ကို host company ဆီကို ပို့ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ထို IP တစ်ခုတည်းကိုသာ ယာယီဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး cPanel အတွင်း ၀င်ရောက်ကာ spam script များကို ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ spam ရှင်းလင်းပြီးမှသာ public ကိုပြန်လည် ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီလိုအပ်လို့ hosting ဘက်က လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုရင် inquiry(at)worldwidemyanmar.com သို့ဖြစ်စေ ဖုန်း +၉၅ ၉ ၇၈၁၈ ၇၉၀၅၀ – ကိုမင်းအောင် သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Shared hosting မှာဆိုရင် account တစ်ခုရဲ့ IP black list ဖြစ်မှုဟာ ၄င်း IP ကိုအသုံးပြုတဲ့ အခြား အကောင့်တွေလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက် WWM Hosting အနေဖြင့် spam mail တွေ့တာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ယာယီပိတ်သိမ်းသွားမှာကို client များအနေနဲ့ဖြင့် နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Visual Private Server (VPS)
၉၉.၉၉၉% အဖြစ်နည်းပါတယ်။ အကယ်၍ သီးသန့်သုံးမယ်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်တဲ့ VPS များကို managed vps အဖြစ် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Image Credit: th3matrex.com
]]> Webmail အား Google (Gmail) Mail Client Apps ဖြင့်အသုံးပြုခြင်း https://www.worldwidemyanmar.com/webmail-google-gmail-mail-client-mobile-apps/ Thu, 20 Feb 2020 11:21:30 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4374
တစ်ချို့ ဝန်ထမ်း ရာကျော်ရှိတဲ့သူတွေအတွက် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခြင်းစီကို Gsuite ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ် သိန်းတစ်ရာကျော် ကုန်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မေးလ် Server သီးသန့် ဝယ်ပြီးသုံးကြတဲ့သူတွေရှိသလို၊ သာမာန် Shared Hosting, VPS Hosting တွေဝယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်ကို ၃ သိန်း ကျော်လောက်ပဲ ကျသင့်ပြီး းUnlimited Email Account အသုံးပြုလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် Gmail ကိုအသုံးများတဲ့သူတွေအတွက် Interface ပြောင်းသွားရင် သိပ်မသုံးတတ်ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Gmail (Web) or Gmail (Mobile Apps) ကနေ မိမိအသုံးပြုထားတဲ့ Webmail account ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဉပမာ ကိုယ်တွေက Mobile Phone နဲ့ နေ့စဉ် Webmail account ကို Mail အဝင်အထွက်စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Android Phone တွေမှာပါတဲ့ Gmail ဆိုတဲ့ apps ကနေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပုံနဲ့တကွပြထားပါတယ်။
Add Account လုပ်ရန် – ပထမဉီးစွာ မိမိဖုန်းအတွင်းက Gmail Apps ကိုဖွင့်ပြီး Account Setting ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်
အောက်ပါအတိုင်း Set up email မှာ Other ဆိုတာကို‌ရွေးပါ
အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်သွင်းပြီး နောက်တစ်ဆင့် Next ကိုနိုပ်ပါ
IMAP or POP3 ကိုရွေးလိုက်ပါ… နောက်တစ်ဆင့် Password ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ Password ရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Incoming server settings and Outgoing server settings တွေပဲဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနေရာမှာ Server လိပ်စာကိုမှန်ကန်အောင်ထည့်ပေးရပါမယ်… ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိရဲ့ domain name က worldwidemyanmar.com ဆိုရင် mail.worldwidemyanmar.com ဆိုပြီး အဝင်အထွက် လိပ်စာ ၂ ခုစလုံးမှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်
Account Options ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ မိမိထည့်သွင်းထားတဲ့ မေးလ်လိပ်စာ, Password, Incoming and Outgoing တို့မှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
]]> How to use Client Area (Member Panel) https://www.worldwidemyanmar.com/how-to-use-client-area-member-panel/ Wed, 14 Aug 2019 16:55:49 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4250
World Wide Myanmar ရဲ့ Customer များအတွက် Member Panel ကိုဝင်ရောက်ပြီး မိမိရဲ့ Domain, Hosting အသုံးပြုပုံ video ဖြစ်ပါတယ်။ cPanel Access ကို ဝင်ရောက်ပုံအဆင့်ဆင့် ပါဝင်ပါတယ်။
]]> 2019-20 ခုနှစ်အတွက် .mm ဒိုမိန်း ဈေးနှုန်းများ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း https://www.worldwidemyanmar.com/2019-20-mm-domain-price/ Wed, 14 Aug 2019 15:47:25 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4246
.mm ဒိုမိန်း ဈေးနှုန်းများကို တစ်နှစ်လျှင် ယခင် ၅၀ဝ၀ဝ ကျပ်မှ ယခု ၆၀ဝ၀ဝ ကျပ်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
]]> September 2019 မှစ၍ cPanel စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.worldwidemyanmar.com/september-2019-wwm-cpanel-license/ Tue, 23 Jul 2019 23:35:59 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4236
September 2019 မှစ၍ cPanel မှပြောင်းလဲလိုက်သော နှုန်းထားများအရ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော VPS(Cloud)နှင့်၊ Dedicated (Metal) WWM customer အနေနဲ့ဖြင့် https://www.cpanel.net/pricing/ ဖော်ပြပါ စျေးနှုန်းများအတိုင်း ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
We are sending you this email as cPanel announcedanew pricing structure last month which moves fromafixed price per server to charging based on the number of accounts on the server. This new structure affects all existing licenses and comes into effect from 1st September 2019.
Per account licensing and license types For clarity, the definition of an account is an account listed in cPanel & WHM, notadomain name. Suspended accounts count towards the account limit. cPanel have also changed their license type names, VPS is now Cloud and Dedicated is now Metal.
If you have any questions or concerns following these changes or anything else, please let us know and we’ll be happy to help.
]]> Local VPS Hosting @ Myanmar | ပြည်တွင်း Server https://www.worldwidemyanmar.com/local-vps-hosting-myanmar/ Thu, 28 Mar 2019 18:14:02 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4219
Local VPS Hosting @ Myanmar
မြန်မာပြည်တွင်းမှာထားတဲ့ Virtual Private Server ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာသာဖြစ်တဲ့အတွက် Ping rate နည်းပါတယ်။ Public IP တစ်ခုရပါမယ်။
VPS Control Panel ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Operating System ကိုုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ KVM Platform ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows, Linux အစုံရပါတယ်။ VNC နဲ့သုံးလိုု့ရပါသေးတယ်။
Fully Manged VPS တွေပါ။ ဒီအတွက် မိမိတို့ဘက်ကနေ Server နဲ့ပက်သက်တဲ့ Operating System Setup and Configuration, Web Server Services တွေကို အထူးသိဖို့မလိုပဲ WWM ဘက်မှ ဝန်ဆောင်မူပေးသွားမှာပါ။
https://www.worldwidemyanmar.com/vps-hosting/ မှာ အသေးစိတ် Plan Packages လေးတွေရှိပါတယ်။
Address : Building 17, Room 602, 5th Floor, MICT Park, University Campus, Yangon, Myanmar.
Phone : +9594500 43919 , +9597818 79050
Website : https://www.worldwidemyanmar.com/
]]> Spam Folder ထဲမေးလ်တွေ မရောက်စေရန် Mail Relay Service https://www.worldwidemyanmar.com/wwm-smtp-relay-service/ Tue, 27 Nov 2018 18:49:21 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4130
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများက မိမိတို့ လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည် newsletters and marketing အီးမေလ်းအမြောက်အများပို့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် Mobile Apps တွေကနေ Notification တွေပိုု့ကြတယ်။ Shared Hosting တွေမှာတော့ bulk emails ပို့ခွင့်မရှိပါဘူး။ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် SMTP Relay ဝန်ဆောင်မူပေးတဲ့ Company ဆီကနေ တစ်လကို အစောင်အရေအတွက် တစ်သိန်း ဆိုရင် တစ်သိန်းဝယ်ပြီးတော့ ပို့ရပါတယ်။
Email တစ်စောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ Simple mail transfer protocol (SMTP) ကိုသုံးပါတယ်။ SMTP Relay ဝန်ဆောင်မူပေးတယ်ဆိုတာက မိမိ Mail Hosting ရဲ့မေလ်းတွေကို ကြားမှာ Mail Server တစ်ခုထားပြီးပို့တာပါပဲ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ဗဟိုစာတိုက်ကြီးကနေ သင့်ဆီကို တိုက်ရိုက်ပို့တာမဟုတ်ပဲ ဒေသဆိုင်ရာ မြို့နယ် စာတိုက်ကနေ တစ်ဆင့်ပို့သလိုပါပဲ။ ဒီအတွက် ကောင်းကွက်တွေကတော့ ဗဟိုစာတိုက်ကြီးမှာ ဝန် Load သက်သာသွားတာပေါ့။ ဒေသဆိုင်ရာ မြို့နယ် စာတိုက်တွေအနေနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိတိကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Mail Relay သုံးခြင်းအားဖြင့် ကောင်းတဲ့ အချက်တွေကတော့
Quick Email Delivery –
တစ်ခါတစ်လေ Shared Hosting မှာ Mail တွေရှေ့နောက် တန်းစီနေရင် ၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရတတ်ပါတယ်။ Mail Relay သုံးထားရင်တော့ ပိုပြီး မြန်ပါတယ်။
Mail တစ်ခုပို့လိုက်တာနဲ့ ပို့လိုက်တဲ့ဆီကို ရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာ tracking လုပ်လို့သလို realtime monitoring ရတဲ့အတွက် တစ်ဖက်က Client ကို မေးလ်ရောက်မရောက် မေးစရာမလိုတော့ဘူး။ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး စိတ်ချရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သာမာန် Shared Hosting သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ မေးလ်ပို့လိုုက်တိုင်း Spam Folder ထဲမရောက်တော့ဘူးပေါ့။
World Wide Myanmar မှ Mail Relay ဝန်ဆောင်မူကို တစ်နှစ် မေးလ်အစောင်ရေ (၁၀ဝ၀ဝ) အောက်ဆိုရင် အခမဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တစ်လ လျှင် (၁၀ဝ၀) သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ WWM Mail Relay Service ကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Setup and Installation အခမဲ့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
]]> Server ထားဖို့ Power, Cooling, Security တွေလိုအပ်နေသပါသလား https://www.worldwidemyanmar.com/colocation-from-worldwidemyanmar/ Tue, 21 Aug 2018 12:06:09 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=4116
Server တစ်လုံးထားဖို့ဆိုရင် Uptime အမြဲဖြစ်နေဖို့, Power Stable ဖြစ်ဖို့, Protecting and Security ရှိဖို့, Fire And Natural Disasters အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရန်နဲ့ , ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်း တွေ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် World Wide Myanmar မှ Co-Location Service များကို အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မူပေးနေပါပြီ။
1U Server/Device space တစ်ခုအား တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀ သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
]]> Inform for your Domain Renewal for 2018-2019 Financial Year https://www.worldwidemyanmar.com/inform-for-your-domain-renewal-for-2018-2019-financial-year/ Fri, 30 Mar 2018 12:58:59 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=3974
We would like to inform that Our Financial Year was changed to (1st October ~ 30th September) instead of (1st April ~ 31st March) according to our government policy. So next financial year 2018-2019 would be until 30th September 2019. That’s why you have to pay for one year and six month for 2018-2019 Budget Year.
One year renewal amount is 50,000Ks + commercial tax 5% (2,500Ks) and Six months renewal amount is 25,000Ks + CT 5% (1,250Ks) for each domain.
Total amount for one domain is 78,750Ks.
]]> Sales and Marketing (6 Posts) https://www.worldwidemyanmar.com/sales-and-marketing-6-posts/ Tue, 08 Aug 2017 10:48:42 +0000 https://www.worldwidemyanmar.com/?p=3816
We’re looking for someone bright, motivated and ambitious who wantsavery hands-on role. You’ll be working alongside and learning from some of the brightest minds in the business.
• To implement and achieve sales plan to ensure achievement of overall company’s sales objectives.
• To implement credit policy and ensure constant adherence to avoid increasing debtor days.
• To implementamarket visit and coverage plan to ensure all markets are covered adequately and product availability is adequate.
• To implement promotional schemes for brand development
• Coordinate and oversee working of the outsourced marketing agency representatives.
• Manage relationship with distributors and his customers.
• Continuously provide and update market intelligence report with client counter strategy.
• Explore new business with own talent and experience.
Please email your resume, current and expected salary to us.